ILinus Torvalds iqala ukubheka okuhle kwiGnome 3 | Kusuka kuLinux
ILinus Torvalds iqala ukubheka okuhle kwiGnome 3
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, I-GNU / Linux, Izaziso, Okunye
Sawubona, nge-gnome-tweak-tool kanye nesandiso sedokodo, i-gnome-3.2 isiqala ukubonakala icishe isebenziseke.
Manje ngithemba nje ukuthi lezo zinto ziba yingxenye yokusetha okujwayelekile kwegobolondo le-gnome futhi zenziwe zitholakale entweni ejwayelekile ye- "system config" kunokufihlwa. Impela, zenze zicishe uma ufuna lokho "okuzenzakalelayo okuhlanzekile", kepha kwenze kulula ukuthola nengxenye yokufaka okujwayelekile.
Noma lokho bekungasondelana kakhulu nokuthi "Kulungile, siyavuma ukuthi besinengqondo" futhi ngenxa yalokho akwamukelekile kwezepolitiki?
Ngalo mlayezo obhalwe ngu Linus Torvalds en G+, impikiswano iqala futhi ngombono wakhe mayelana I-Gnome 3. Masikhumbule ukuthi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lo mlingiswa oyimpikiswano waba Xfce ngokusho lokho I-Gnome 3 kwakuwubudlabha, futhi wayedinga okuthile okungasebenziseka kangcono.
Manje, manje iyasitshela:
"Sawubona, ngethuluzi le-Gnome Tweak kanye nesandiso se-Dock, iGnome 3.2 isiqala ukubonakala icishe isebenziseke."
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi abasebenzisi abaningi babuyela emuva I-Gnome 3 Nje I-Torvalds wathi hahaha.
Kubonwe ku-: HumanOS.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » ILinus Torvalds iqala ukubheka okuhle kwiGnome 3
Indoda endala, ubungavele uyihumushe ukuthi ngiyenqena ukufunda ngesiNgisi
Okubi kakhulu kukho konke lokhu ukuthi i-gnome "iyasebenziseka kakhulu" ngenxa yezandiso hhayi amathuluzi endabuko uqobo. Ngokungafani ne-KDE, ama-plasmoid engeza ukusebenza okwengeziwe emvelweni, kepha awabambi iqhaza ekwenzeni imvelo "isebenziseke kakhulu".
Okufanele kwenziwe yithimba le-gnome ukwamukela izithuthukisi ngokwendabuko ezinikezwa yilezi zandiso.
Ngisebenzise i-gnome-Shell izinyanga ezimbalwa futhi nakanjani ngithanda i-xfce noma i-lxde, ngiyagcizelela, ziyashintsha futhi zisebenzisa imemori encane.
AbakwaLinus Torvalds bangasho ukuthi ngobuningi obusuka edeskini le-X noma le-Y, isilima esilandela umbono wokubuka siyaphuma siyoshintsha ideski lokuthile okushiwo umuntu (odumile noma cha, omkhulu noma cha).
Nginokuhlolwa kwe-Debian + KDE kokuhlukaniswa okukodwa nokuhlolwa kwe-Debian + XFCE kokunye futhi njengoba ngifaka okwakamuva ku-KDE ngiyivula kuphela ukuze ngiyivuselele.
Akukho lutho olubhaliwe ngokuthandwa futhi uLinus Torvalds ngeke angiphoqelele yena, hahaha.
Ngokuqondile, uhlanya ngalunye olunengqikimba yalo, ngiyisinambuzane futhi ngiyamesaba, ku-xfce ngazizwa ngathi aluphelele, kepha kufanele ngivume ukuthi angikazami isikhathi eside, yize sengikufakele imishini endala yabanye abantu.
Ngibathanda bobabili i-Unity neGnome 3 futhi ngithola ukuthi kulula kakhulu ukuzisebenzisa, ezisebenzisekayo nezinhle futhi kubonakala kimi ukuthi lokhu kungokwesiko futhi kunemizwa njengoba kwenzeka kimi ngenye isoftware.
Yebo, yini ukutholwa kweTorvalds (ngokulibaziseka okuthile, heh). Kusukela kukhishwe i-Fedora 15 (okwakuyi-Gnome 3 distro yokuqala (gtk3 + mutter + gnome-shell, et al) usuvele usunayo ithuluzi le-Gnome-tweek kanye nezandiso eziningi ezikhona manje.
Ngiyabonga ngobuqotho nenhlonipho yami kuLinus, kepha kwesinye isikhathi wenza zonke izinqumo ezisheshayo futhi athi "trollera" (yebo gnu, yebo stallman, yebo kde4, yebo gnome3, yebo umklomelo weP. De Asturias, njll, njll. .) ukuthi akusekho okufanele ukusho (ha).
Ishumi nantathu okwesibili ngiyakutshela, ama-distros okuqala ananoma yiluphi uhlobo lwe-gnome 3 ahlala njalo amabili.
2) i-Arch Linux.
Mhlawumbe uqinisile futhi, uma kunjalo, ngiyakwazisa ukucaciselwa (okwesibili), kodwa futhi ngingabonga uma unganginika umthombo walolo lwazi, ngoba mhlawumbe ngangishiywe ngumqondo ongalungile, lapho inguqulo yokukhishwa okusemthethweni kweGnome 3 kumenyezelwe esizeni seGnome ngezinguqulo ezimbili zeLiveCD zeFedora ne-Opensuse; kwathi kamuva lapho lapho kwamenyezelwa uFedora 15 njenge-distro yokuqala esemthethweni nawo wonke amaphakheji wephrojekthi yeGnome 3.
Angazi noma uqonde kuphela ukuthi igobolondo le-gnome 3 noma i-Arch ne-Gentoo yangempela babe ngabokuqala ukuba nohlobo lokuqala (hhayi ukukhishwa) lwe-Gnome 3. Uma usho kuphela igobolondo, khona-ke sikhuluma ngezinto ezahlukahlukene, kepha yebo usho inguqulo esemthethweni (Ephreli 2004), ngakho-ke ngishiywe ukuvuma iphutha lami nokuntuleka kolwazi.
Bengisho ukuthi: Ephreli 2011, hahaha
lapho kumenyezelwa uhlobo olusemthethweni lokukhululwa kweGnome 3 kusayithi leGnome ngezinguqulo ezimbili zokuhlola ze-LiveCD kuFedora nase-Opensuse
Gcina okuthile engqondweni, uFedora yi-distro eletha izinto eziningi enguqulweni ngayinye, futhi ngicabanga ukuthi, angiqiniseki, ukuthi kuFedora bavivinya izinto ngaphambi kokukhipha inguqulo ezinzile.
Futhi ngicela uqaphele lapho ubhala
IComputer Guardian kusho
Ngenhlanhla, lokho okushiwo ngisho nama-gurus kuza ku "pairo" wami; ngiyajabula ukusebenzisa i-gnome-shell ivumelana nalokho engikucelayo ngemvelo yedeskithophu yami (ikhono lokusesha izinhlelo zokusebenza ze- "de facto" liyamangalisa)
Phendula ku-IT kuDuty
bheka hahahaha, ngizohlala ne-maverick ize ithuthukiswe kahle Bulala imfoloko yakudala yeGnome: L
Ukukhetha okuhle ^^
Futhi yilokho engikubonayo ukuthi ama-distros amaningi awatholakali ku-Ubuntu kuphela, kepha lawo asebenzisa i-GNOME njengedeskithophu enza lokho, athuthele kwenye ideskithophu. Futhi ngokuthanda imibala… uma uDon Linus eyithanda iGnome, ukhululekile ukuyisebenzisa njenganoma ngubani kithi.
Ngisebenzisa i-Xfce ngenxa yokuthi ilula kangakanani, futhi kulula kangakanani ukuphatha nokuthi isenziwe ngokwezifiso kangakanani (okungenani nge-xfce sisengakwazi ukujabulela i-Compiz ne-Emerald). : B
Bengisalinde umbono wale ndoda -.-
/ Uwavula kanjani amafayela we-CHM ku-Linux
I-Bluefish 2.2.0-2 iza ekuhlolweni kwe-Debian